I-TIMBERTECH VS TREX DECKING - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi I-TimberTech vs Trex Decking
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokuthelekisa kwiTimberTech vs Trex Decking kubandakanya eyona ilungele ukuzinza, indleko kunye newaranti.
Iiplanga zasemva kwezindlu yeyona projekthi yokugqibela yokuphucula ikhaya 'yokuhlala'. Xa yenzelwe kwaye yakhelwe ukusongela ukujikeleza umhlaba, ukuqaqambisa amanqaku amanzi, okanye ukubonelela ngemibono emihle yemihlaba ejikelezileyo, ipaki iba yindawo yokubuyela ekhaya. Ngelixa ukhuni lwalonwabele iminyaka yokuba lukhetho oluphezulu lokuhombisa, luthathelwa indawo zizinto ezintsha kunye nezinto zePVC.
Umyeni nomfazi inkcazo yebhayibhile
Izinto ezenziwe ngomthi zifuna ukugcinwa rhoqo, kwaye kuxhomekeke kwimozulu, kunokufuna ukubekwa endaweni yazo ngokupheleleyo. Ukuhonjiswa ngokudibeneyo okunje ngeTimbertech kunye neTrex iimveliso ezenziwayo zenziwe ukuba ziphantse zingabi nasondlo, zihlala ixesha elide, kwaye ziguqulwe ngokulula ukwenza uyilo lomgangatho wesiko. I-Timbertech kunye ne-Trex edibeneyo yokuhombisa zizinto ezimbini zabakhuphisana phezulu. Apha ngezantsi siza kugubungela i-pros kunye ne-cons yohlobo ngalunye oludumileyo lwe-deck brand.
Ukuqina kweTimberTech vs Trex
TimberTech vs Trex Amaxabiso
Amaxabiso eTrks Deck
Ixabiso le-TimberTech Deck
I-Trex vs iTimberTech Warranty
IFiberon vs Trex vs TimberTech
I-TimberTech yajoyina imakethi yokuhombisa ngomdibaniso ngo-1996 kwaye yaziwa ngokufaka amacala omane amabhodi ayo okudibanisa nge-intshi ye-1 / 16th, iqokobhe elisekwe ngeplastiki. Bayibiza le ndlela ngokufaka kwaye basebenzise le nto yokuthintela ukungunda, ukudyobha kunye nokuphela kwezinto.
I-Trex, eyona nkampani yaziwa kakhulu njengevulandlela ekwakhiweni kokuhonjiswa, ishiya ezantsi evulekile kwaye kuphela iingubo eziphezulu kunye nenxalenye yamacala ngokubamba. Indlela esekwe kumonakalo obangelwe kukwandiswa kwamanzi okuphelela phantsi komphezulu womhlaba. Ngomgangatho ovulekileyo, amanzi ayakhutshwa kwaye ibhodi iyoma kumoya womoya, ukuthintela ukubola.
Yonke into ebekiweyo iyakunyamezela ubunzima bemozulu engaphandle kunye namaqondo obushushu kodwa inokubonisa ukuphela kokuthintela kuphela kwiinyanga ezintathu okanye ezine zokuqala. Indlela yokuhombisa edityanisiweyo yokulinganisa yokuphela isekwe kwinkqubo ye-Delta E metric. Utshintsho kumbono obonakalayo wombala ulinganiswa kwisikali se-Delta E ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100. Utshintsho kumanqanaba ambalwa kuphela eDelta E kunzima ukuwabona.
Xa kuziwa ekuchaseni ukuxhathisa, inxenye yokuqwalaselwa yile nto yenziwe ngayo iibhodi. I-Trex yimveliso yokuhombisa edityanisiweyo eyenziwe ngeetshipsi ezenziwe ngokhuni eziphinda zisetyenzisiwe, ucinezelo lwamaplanga, kunye neplastiki ehlaziyiweyo. I-TimberTech yibhodi yeplastiki eyenziwe nge-PVC kunye neplastiki efanelekileyo. Kwezinye iimvavanyo zokuqala, i-TimberTech ikrwitshe ngokulula kune-Trex decking, ibangela ukukrala okunzulu.
Abanye abantu, imikrwelo kumgangatho wokhuni okanye kumgangatho wokhuni wonakalisa inkangeleko. Ngelixa abanye abantu bengakhathali, i-Trex yaziwa ngokunganyangeki ngakumbi kune-TimberTech, isenza olu phawu lubalulekileyo. Ukumelana nokukrwela akuthethi ukuba ukuhonjiswa akusayi kunikezela nakuphi na ukukrala konke konke kodwa kuya kumelana nokukhuhla okuncinci kunye nokukrwada.
Uyilo lomgangatho wanamhlanje kunye noTrx.
Nangona iindleko zokuhombisa ezidityanisiweyo zingaphezulu kweenkuni, izibonelelo zokusebenzisa iibhodi ezidityanisiweyo zibandakanya ukonga imali ngenxa yokuqina kwayo kunye nokugcinwa kancinci. I-Trex ivule indlela ekudibaniseni ukudityaniswa kwaye ihlala ibiza kancinci kuneTimberTech, kodwa umahluko ulinganiselwe. Zombini ezi nkampani zibonelela ngamanqanaba amaxabiso asekwe kumgangatho kunye nemibala yokuhombisa.
1. Trex Select (inqanaba lohlahlo-lwabiwo mali) $ 7 ukuya kwi-9 yeedola nge-sq ft.
2. Ukuphucula iTrx (kwinqanaba eliphakathi) $ 5 ukuya kwi-7 yeedola nge-sq ft.
3. I-Trex Transcend (ephezulu-phezulu) i-10 ukuya kwi-12 yeedola nge-sq ft.
Umgangatho wephuli yangemva kweTimbertech. Bona Okuninzi iintlobo zeekhonkco Apha.
1. Ukuvunwa kweTimberTech AZEK (inqanaba lohlahlo-lwabiwo mali) $ 9 to $ 12.25 per sq ft.
2. I-TimberTech AZEK Arbor (phakathi kuluhlu) $ 11 to $ 13 per sq ft.
3. I-TimberTech AZEK Vintage (ephezulu-ephezulu) $ 11.40 ukuya kwi-14 yeedola nge-sq ft.
Xa usakha idesika, i-Trex iya kuba phakathi kwe-10-20% ngaphantsi kwe-TimberTech kodwa isenokubonakala ngathi ibiza ama-40-50% ngaphantsi xa ungabandakanyi iindleko ezongezelelekileyo zomgaqo wesitimela kunye ne-substrate. Izinto ze-Trex zokurola kunye ne-substrate zibiza kakhulu kuneTimberTech. Indlela elungileyo yokonga imali kwiprojekthi yakho yomgangatho kukusebenzisa i-Trex decking kunye nokwakha i-Railings kunye ne-substrate evela kwimithi yokwenyani. I-Pine isebenza kakuhle kuloliwe kwaye inokuhlanjwa ngombala nokuba kufutshane nomgangatho wokudibanisa okanye umbala ohlukileyo njengesithethi.
Ubude kunye nobubanzi bebhodi nganye bukwanendleko kwiTrex kunye neTimberTech. Mfutshane, ubude obude bebhodi zihlala zibiza kakhulu kodwa zigubungela ngaphezulu kwesikwere kunebhodi yebhodi ende emxinwa. Sebenzisa izixhobo zokubala zokufumana umda wonyawo wesikwere kuyo nayiphi na ibhodi oyikhethayo.
Trex uphawu ngomhlophe Uyilo lomgangatho wokuthuka kunye inlay zokuhombisa.
Kwiminyaka eyadlulayo, iinkampani zokuhombisa ezidityanisiweyo zathengisa iimveliso zazo njengasimahla. Kodwa emva kweemveliso ezininzi ezivela kubavelisi abohlukeneyo zasilela kwaye zabangela ukukhumbula okubizayo ngenxa yeebhodi ezibolayo kunye nokwahlukana, iinkampani zacebisa ngamandla ukugcinwa rhoqo. Zombini i-Trex kunye ne-TimberTech zibonelela ngeziqinisekiso kunye ne-Trex enikezela ngeminyaka engama-25 yokuphela kunye nebala lewaranti yomgangatho wabo wokudibanisa kunye neTimberTech ebonelela ngeminyaka engama-30 yokuphela kunye nebala lewaranti.
Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, inkqubo ye-Delta E ilinganisa inani lotshintsho kumbala. Zombini i-Trex kunye ne-TimberTech azizukugubungela ukuphela kude kube kufikelela kwiiyunithi ze-5 ze-Delta E. Buza umthengisi wakho malunga nenqanaba lenkqubo ye-Delta E kunye newaranti xa uthenga umgangatho wokudibanisa.
Ukuba ukungunda okanye ukungunda kubangela ukubala, akukho nkampani iya kuwugubungela umonakalo. Uninzi lwabo bonke abavelisi beqonga elicetyiswayo bacebisa ukuba kugcinwe indawo yakho ecocekileyo icocekile kwaye ingenakho ukungcola. Ukutshayela kunye nokuhamba kwamaphepha ngesepha kunye namanzi kuya kunceda ukuthintela ukungunda kunye neendawo zokungunda. Zombini i-Trex kunye ne-TimberTech zibonelela ngesiqinisekiso esilinganiselweyo sokubola, ukusasazeka kunye neziphene zezinto ezibonakalayo.
Ngo-2012, i-TimberTech yathengwa yinkampani yemveliso yokwakha ezimeleyo ebizwa ngokuba yi-AZEK kwaye ithengiswa phantsi kwesebe elihlala ngaphandle lase-AZEK. I-TimberTech igcina igama elifanayo kwaye iyimveliso efanayo yokutsala njengangaphambili, kodwa ithengiswa kunye ne-AZEK njengenkampani yabo engumzali.
Ngelixa iTrex kunye neTimberTech zinemigangatho emithathu yemveliso, iFiberon ibonelela ngamanqanaba asixhenxe kunye neemveliso ezimbini ezithengiswe ngeDepho yasekhaya ngokukodwa. IFiberon ineemveliso zeeprojekthi ezijolise kuhlahlo-lwabiwo mali kunye nangaphezulu, kubandakanya nokunikezelwa kwepremiyamu. Iintlobo zazo zeemveliso zibandakanya iibhodi ezinamacala amathathu kunye neecala ezi-4, amacala aqinileyo okanye anemigca, kunye nobude beebhodi ezongezelelweyo njengakwimigca yeSymetry kunye neHorizon.
IFiberon yenze zombini iiplastiki zePVC kunye neebhodi zokudibanisa ngelixa iTrex ithengisa kuphela iibhodi ezihlanganisiweyo kunye neTimberTech kuphela iibhodi zeplastiki zePVC. Iimveliso zeFiberon zenziwa zifumaneke ngokubanzi xa zithengiswa kwiivenkile zokuphucula ikhaya ezinje ngeDepho yaseKhaya xa ithelekiswa neTrx kunye neTimberTech, eqhutywa ziinkampani zemithi ezizodwa kunye neenkampani zokuhombisa.
Ngamaxabiso asezantsi kuneTrex kunye neTimberTech, amaxabiso ongezelelweyo kunye nemigangatho yomgangatho, kunye nokukhetha imibala eyahlukeneyo, iFiberon ibonelela ngeendlela ezinokuthanani nokuzenzela kunye neengcali.
Ukunceda ukwenza uyilo lwakho lwedesika ekhayeni lakho siqwalasele okona kulungileyo isoftware yoyilo Usebenzisa enye yezi nkqubo unokuyila kwaye ube nomfanekiso-ngqondweni wendlela idesika yakho eya kujongeka ngayo ngokusekwe kulwakhiwo lwangasemva kwendlu yakho.
Siyathemba ukuba ukonwabele ukuthelekisa kwethu iTimbertech vs Trex decking. Singathanda ukuva ingxelo yakho malunga nokuba yeyiphi oyicebisayo kunye nento oyithandayo okanye ongayithandiyo ngohlobo ngalunye.
Wenza ntoni usher
ixabisa malini isipha
Ingoma yelizwe ngootata kunye neentombi